Fiidiyowyada Waalidnimada - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Waqtiga Shaashadda iyo Fayo-qabka Ardayda: Korinta Carruurta Caafimaadka Qabta ee Tech
Daawo 20 daqiiqo oo hadal ah oo ku saabsan maareynta waqtiga shaashadda iyo dejinta tilmaamaha qoyska ee ku saabsan teknolojiyadda guriga oo uu bixiyo Dave Eisenmann, Agaasimaha Tiknoolajiyadda Waxbarashada & Adeegyada Warbaahinta.
Barbaarinta Webinar ee Da'da Dijital ah: Helitaanka Qaybaha Isu-dheellitirka Caafimaadka I & II
Snapchat, Instagram, Twitter, Fortnite iyo inbadan… Teknolojiyada waa qeyb weyn oo kamid ah aduunka caruurteenna! La socodku wuxuu noqon karaa mid dhib badan, laakiin habka wanaagsan oo sifiican loo ogeysiiyo waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa mustaqbalka canuga iyo dhaqankiisa. Baro sida loo maro websaydhka hoos ku qoran. Ku soo biir Mathew Meyers, oo ah ruqsad guur oo ruqsad haysta & daaweeye qoys oo ku takhasusay cilaaqaadka qoyska iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda caafimaadka leh oo ay ku jiraan qabatinka ciyaarta fiidiyowga iyo Dave Eisenmann, Agaasimaha Tiknoolajiyadda Tilmaamaha & Adeegyada Warbaahinta ee Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka, iyagoo ka wada hadlaya Waalidnimada Da'da Dijital ah: Helitaanka Caafimaad Caafimaad leh Isu dheellitirka Hel talo bixinno iyo fikrado lagu ilaalinayo wada hadalka furan ee ku saabsan tikniyoolajiyadda oo aad fahanto doorka muuqda ee aad ka ciyaareyso ka caawinta dhallinyarada inay mas'uul ka noqdaan oo ay ku badbaadaan adduunyada casriga ah ee casriga ah Waxaad ku daawan kartaa fiidiyowyada dhammaantood adoo ka bilaabaya mowduuca koowaad ee hoose ama horay ugu sii dhaaf mowduucyada gaarka ah ee aad dooratay:
Qeybta I, 53 daqiiqo, duubista codka ee hoos ku xusan: Waqtiga Shaashada & Isu-dheellitirka, Feejignaanta & Diirada, Balwadda, Waalidka & Qaabaynta, Korjoogteynta & Shaandhaynta, iyo Talooyinka Da'da
Qeybta II, 54 daqiiqo hoosta: Istaraatiijiyadaha Waalidiinta iyo Tabaha, Raadinta Dijital ah, Cyberbullying, iyo Pornography iyo Sexting
Qaybta I: Waqtiga Shaashadda & Isu-dheellitirka
Qaybta I: Feejignaan & Diirad saarid
Qaybta I: Balwadda
Qaybta I: Waalidnimada & Qaabaynta
Qaybta I: Korjoogteynta & Shaandhaynta
Qaybta I: Talooyinka Talooyinka da'da
Qaybta I: Hirgelinta Isbedelada
Qeybta II: Xeeladaha & Talooyinka Waalidnimada
Qeybta II: Raadadka Dijital ah
Qeybta II: Caga-jugleynta internetka
Qeybta II: Pornography & Sexting
Qeybta II: Talaabooyinka Xiga & Kheyraadka Dheeraadka ah
(Qiyaastii 9 daqiiqo, 3:50 - 12:50)
Waa maxay farqiga u dhexeeya madadaalada iyo waqtiga shaashadda waxbarashada ?
Waqtiga Shaashada Apple waa guul weyn oo qof walba gaadhay, oo ay ku jiraan waalidiinta!
Sideed uga soo baxaysaa waajibaadka guriga iyo dugsiga?
Carruurtaadu ma ku shaqeyn karaan xuduudaha aad dejisay, iyo sida loo maareeyo tan iyagoon qaylin oo qaylin.
Sida loo dejiyo xadka loona abuuro cawaaqib dabiici ah, loona oggolaado guuldarada.
Waqtiga shaashadu wuxuu noqdaa mid dhibaato leh markay beddesho cilaaqaadka adduunka dhabta ah iyo damaca dunida dhabta ah.
Tiknoolajiyada sariirta dhigo habeenkii , qolka jiifka ha dhigin.
Kaliya seddex qasabad si aad u aragto barnaamijkaaga isticmaalka 24-kii saac ee la soo dhaafay ama usbuucii la soo dhaafay.
(Qiyaastii 4 daqiiqo, 12:50 - 16:50)
Laba nooc oo fiiro gaar ah:
Nidaamka feejignaanta firfircoonaanta - ka caawi carruurteenna inay xaddidaan tan
Nidaamka foojignaanta ee foojignaanta ah - shaqada guriga ayaa fidisa "muruqyada". Ka caawi carruurta inay dhisaan awoodda kordhinta waqtigooda feejignaanta.
Sannad dugsiyeedka K-12 waa waqtiga ugu habboon ee lagu barto diiradda
Ka caawi carruurta inay xudduudaha dhigaan. Waxaan u baahanahay go aan si aan xuduuda u dhigno, yaanay u ogolaan teknolojiyaddu inay xadka inaga dhigto
(Qiyaastii 4 daqiiqo, 16:50 - 21:00)
Farsamo maleh miiska cashada ama gaariga: Meesha ay cagahaagu yaalliin joog .
FOMO (Cabsida Maqnaanshaha)
Goorma ayay carruurtu balwad yeeshaan? Markay carruurtu khiyaaneeyaan adeegsiga tikniyoolajiyadda. Markay garan waayaan waxay ku sameeyaan waqtigooda firaaqada ama ay yihiin jittery. Hadday dib ugala noqdaan weji ka-waji xiriir. Haddii aysan ka soo bixin waajibaadkooda guriga iyo dugsiga.
Markaad dareento in tikniyoolajiyaddu la wareegtay, u tag taageero. La xiriir la-taliye (eeg Kheyraadka Wanaagsan ee Ardayga )
(Qiyaastii 9.5 daqiiqo, 21:00 - 32:20)
Wax ka qabashada sharciyada kala duwan ee furiinka / guryaha kala geddisan: waxay u baahan yihiin wada hadal geesinimo leh. Ka bilow aragtida si qoysku isku bog u noqdo. Taageer xeerarka waalidiinta halkii aad carruurta ku wareerin lahayd khilaaf. - La xiriir la-taliye (eeg Kheyraadka Wanaagsan ee Ardayga )
Qeybta Waxkaqabashada Waalidka ee 'Common Sense Media'
Sideen tusaale fiican ugu noqdaa qadarka waqtiga / waqtiga isticmaalka ee aan kula qaato aaladaha dhijitaalka ah ee guriga? Joogitaan.
Waa caadi in loo sameeyo sharciyo ka duwan waalidiinta marka loo barbardhigo carruurta, sida qiimeynta dhaqaaqa.
Meesha cagahaagu joogaan .
Goynta dib u jeedinta dhijitaalka ah
Telefoonkaagu waa mashiinka jeebka jeebka lagu rito
La'aanta qoto dheer iyo xaqiiqada cilaaqaadka khadka tooska ah sida ciyaaraha internetka. Ka caawi carruurtaada in la ogaado oo ay ka mid noqdaan.
(Qiyaastii 7.5 daqiiqo, 32:20 - 39:40)
Noqo mid hufan.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho tikniyoolajiyadda, waa sida ay noqonayso. Adigu waxaad tahay waalidka oo waxaad tahay wakiil ka tirsan hantidooda.
Fur furaha WiFi-ga internetka ee guriga 'DNS'
Taleefanka gacanta, halkii aad ka isticmaali lahayd Curbi sida ku xusan fiidiyowga:
Xaddidaadda Apple iPhone ama iPad
Google / Droid Family Link
(Qiyaastii 5 daqiiqo, 39:40 - 46:40)
Da'da ugu wanaagsan ee cunuggu ku heli karo taleefan casri ah - marka hore u caddee ujeeddada. Mudnaanta ayaa ah natiijada mas'uuliyadda.
34% waalidiinta Minnetonka ma ogola warbaahinta bulshada ilaa dugsiga sare
(Qiyaastii 4 daqiiqo, 48:26 - 52:40)
Sida wax looga beddelo hadda- si tartiib tartiib ah wax u dhaqan, dib u laabo oo ku bilow aragtida tikniyoolajiyadda ee qoyska
(Qiyaastii 15 daqiiqo, 4:50 - 20:38)
Ku hogaami xiisaha. Sheekaysiga Xoogga leh ee Carruurta: Ka bilow "Kawaran haddii .." iyo "Miyaad leedahay ..?"
Cawaaqib dabiici ah. Haddii ay noqoto loolan awoodeed, dib u laabo.
Carruurtu waxay galayaan qaladaad. U isticmaal iyaga sida daqiiqado wax la bari karo oo jacayl shuruud la'aan ah. Ka taxaddar inaad kala soocdo xukunka iyo ceebta.
Aamina oo hubi, bixi kormeer. Immisa ayey Waalidku Khuujinayaan?
Shaqadeenu waa waalid, ma ahan saaxiibkooda ugu fiican. Maya dheh oo samee xuduudo adag. Sidaad u aragto adkaanta, sii masuuliyad dheeraad ah.
Eeg Qeybta I: Talooyinka Talooyinka da'da
(Qiyaastii 6.5 daqiiqo, 20:38 - 27:19)
Muddo intee le'eg ayaa alaabtu halkaas ka jirtaa? Ardaydayda '1995 Raadka Dijital ah
Abuuritaanka joogitaan wanaagsan / raadad dijitaal ah
(Qiyaastii 9 daqiiqo, 27:19 - 36:12)
Bixinta xoogaa kormeer ah - maxay carruurtaadu dhajinayaan, arkeeyaan?
Ha badin oo xukun ha gaarin.
Ka fogow aaladaha iyo qoraalada aan lagaranayn, ha u siinin barahaas bogag dhagaystayaal ah.
Sideed naftaada u mataleysaa oo aad ula macaamilaysaa dadka kale khadka tooska ah?
Qaabaynta waalidka - sidee ayaad ula macaamilaysaa dadka kale khadka tooska ah?
U adeegso tikniyoolajiyad naxariis, naxariis, iyo sharaf. Xusuusnow qaanuunka dahabiga ah.
(Qiyaastii 11 daqiiqo, 36:12 - 47:47)
Barnaamijyada qarsoon ee lagu qariyo sawirrada
Kaliya waxyaabo dijitaal ah oo ayeeyadu oggolaan karto - ma jiraan wax dijital ah oo gaar loo leeyahay.
Asturnaanta iyo sirta
Fiiri Qeybta I: Sifeynta
Dhibaatooyinka soo raaca ee sawir-gacmeedka - saameyn ku yeelashada cilaaqaadka, ujeeddooyinka iyo meeleynta xiriirka jireed ee ka sarreeya shucuurta
Mawduuca xasaasiga ah ee qarsoodiga ah wuxuu siinayaa awood aad u weyn markii la qariyo - carruurtu waxay ka baranayaan galmada internetka. Ceebta ka saar isla'egta. Sheekaysiga Xoogga leh ee Carruurta: Ka bilow "Kawaran haddii .." iyo "Miyaad leedahay ..?"
(Qiyaastii 6 daqiiqo, 48:14 - 54:00)
Warqadda waalidka ee weyn iyo barnaamijka taleefanka ee CommonSenseMedia.org
Mathew Meyers, La-talin Jaban iyo Xiriirro Bogsiinaya Blog
Dave Eisenmann, Blog Next Waxyaabaha Blog iyo Top 10 Talooyin loogu talagalay korinta carruurta Tech Tech
Waa caadi in Furka laga saaro. Maalinta Baashaalka Qoyska - U Sameynta Waqti Tayo Leh Xiriirka
Dijital Caafimaadka & Fayaqabka /